Tranonkala miorina amin'ny sary SVG tsara indrindra. Famoronana an-tserasera
Manuel Ramirez | | Inspiration, Cartoon vector
ny Ny sary SVG dia mipetraka ao amin'ny tambajotran'ny tambajotra mba hahafahantsika mahazo traikefa amin'ny Internet tsara kokoa amin'ny ankapobeny mandritra ny taona maro. Ary ireo karazana sary ireo, ankoatry ny ahafahana manitatra nefa tsy manary kalitao amin'ny famaritana, dia mazàna dia angon-drakitra kilobytes.
SVG dia endrika isan'ny Sary vector-monina XML ho an'ny sary 2D. Ity karazana endrika sary ity dia azo ampiasaina amin'ny karazana effets, sary, sary mihetsika ary ny fifandraisana mba hanomezana tombony bebe kokoa an'ireo tranokala nampidirina. Satria kely ny lanjany, mamela anao hilalao amin'ireo karazana fiasa ireo ianao, noho izany dia hasehonay ireo tranonkala tsara indrindra izay manana sary SVG mba hanomezana aingam-panahy na ohatra mazava amin'ny fomba hanaovana ilay manaraka izay halehanay ataovy ho an'ny mpanjifa na asa.
1 Agency an'ny lehilahy mandeha
2 Pays malaza
10 Ny Architect Paris
11 Tetikasa Redspace
19 Fanandramana fiantohana
20 Ny fanjakan'ny teknolojia eropeana
22 Buffy mpampionona
Agency an'ny lehilahy mandeha
Agence famolavolana nomerika izay manamafy ny tenany amin'ny tranokala tena manaitra ny fampiasana sary SVG ary ho an'ny fikitika manokana amin'ny sary. Ny iray hanome aingam-panahy avy tsy misy fisalasalana. Ny pointer novaina ho teboka mena dia manaitra, izay mifanaraka amin'ny singa tsirairay mandrafitra ny tranonkala.
Tranonkala misy famolavolana faran'izay mahafinaritra izay misy ireo tenifototra izay miseho ho "pop up" ary tsy mampihena ny fahitana sy ny traikefa natolotr'ity tranonkala ity izy ireo. Ny tenifototra sasany izay "fihinin'ny" sary mihintsy no afaka ampitaina manoloana.
Noho ny antony lehibe maha-horonan-tsary azy dia te hahafantatra ny fomba hampitambarana sary PNG miaraka amin'ilay lahatsoratra aseho rehefa mihodina isika.
Tranonkala ahazoana aingam-panahy ny hevitrao tsara amin'ny sarimiaina sasany izay miadana tsara rehefa mandroso amin'ny atiny. Ny fandrosoana lehibe eo amin'ny famolavolana tranonkala izay atrehantsika ankehitriny dia manan-danja, ary 10 × 17 izy io, amin'ny fikasana hampiseho mpanakanto 26 mandrafitra ny rakikira mozika ankafizin'izy ireo amin'ny taona 2017, ilay mampiseho azy.
Tsindrio fotsiny ilay kisary misy tsipika telo mitsivalana eo amin'ny ankavanana ambony tadiavo ireo sarimiaina malemy sy malefaka mampiseho ny menio lohatenin'ity tranonkala ity. Ny ohatra faratampony amin'ny fomba fanamafisana ny sarimiaina amin'ny tranokala.
Fivarotana an-tserasera tsy misy filalaovana be amin'ny sarimiaina, fa izany dia ohatra iray hafa amin'ny fiatrehana ny sary SVG.
Avy any Espana isika dia manana Rocka haseho ny tetezamita loko lehibe vita izany rehefa mizaha ny atin'ny tranokala ity amin'ny kodiarana totozy. Fanandramana tsara tarehy amin'ny karazana sarimiaina.
Volavolan-tranonkala izay mitady ny fahatsoran'ireo singa ao aminy mba hampiasaina be amin'ny fitambarany, tsy misy fihoaram-pefy fahaiza-manao amin'ny sary an-tsary sasany izay aseho amin'ity traikefa an-tranonkala lehibe atolotry ny Paradiso ity. Nasongadinay indray fa ny menio lohan-doha be famoronana dia vita amin'ny sarimiaina.
Studio mamorona monina any New York izay mampiseho ny fikasana rehetra a menio lohateny izay misokatra eo alohanay miaraka amina andiana sary mihetsika sy sary tena manintona. Raha mitady menio tokana ho an'ny tranonkalanao ianao dia efa afaka mahazo aingam-panahy avy amin'i Zero's. Rehefa mamindra ny tondro ny totozy isaky ny safidiny ianao dia hiseho ireo sary sy sary mihetsika maro loko ireo.
Ny Architect Paris
Mahaliana ny efijery fandefasana azy sy ilay endrika mahafinaritra an'ny asehoy ireo bitsika farany, lahatsoratra tao amin'ny Facebook na sary amin'ny Instagram. Tranonkala manome voninahitra ny fanandramana tranonkala.
Tetikasa iray misy ny hevitra hampiovana ny fotoana amin'ny megacities sinoa ary manana fahaiza-manao tena tsara amin'ny fampisehoana an'io misaotra ny fadesiny sy ny gradients ananany amin'ny faharanitan-tsaina amin'ny fampiasana ny loko miloko. Sary lehibe miseho sy manjavona miaraka amina sary mihetsika ambony asa tanana sy asa tanana. Mialona izany.
Orinasa mpamokatra sarimihetsika sy fahitalavitra frantsay mampiseho a hery lehibe amin'ny horonan-tsary amin'ny alàlan'ny fanovana eo noho eo amin'ny alàlan'ny fihazonana ny tondro ny totozy isaky ny sokajy. Sokafy tsirairay izy ireo mba hahitana hoe manao ahoana ny fanandramana amin'ny famolavolana tranonkala.
Mampiasa loko roa lehibe ity tranonkala ity mamorona ny mifanohitra tsara fotsiny mamantatra ny tenany. Izy io koa dia miavaka amin'ilay sarimiaina any ambadika izay mihetsika amin'ny fotoana rehetra.
Zen Studio dia mitondra antsika ity tranonkala ity a mpanakanto ekena erak'izao tontolo izao ary izany no ohatra ambony indrindra amin'ny mety ho tranonkala: clip video misy ifandraisany izay ny mpanondro antsika no mifehy ny sary miavaka. Tena ilaina.
Orinasa mpanadihady monina any Brezila izay mampiasa sarimiaina toy ny lambam-baravarana hanehoana ny serivisinao tsirairay. Tsotra, nefa mandaitra amin'ny fampiasana ny loko maitso sy manga ho an'ny ambadika banga.
Traikefa an-tsary iray hafa mifototra amin'ny mavo sy mainty, ary misy fiantraikany lehibe amin'ny fampisehoana ireo loza.
Frontend portfolio mampiseho a andian-tsarin'ny tranonkala tsy mamela olona tsy hiraharaha izany.
Toeram-piaraha-miasa miaraka a lasibatra napetraka amin'ny loko maitso. Sarimiaina mahasarika maso kokoa ho an'ny typografika miharihary izay mandray ny sehatra afovoany noho ny fampiasana io hetsika malama sy marina io. Ny fitrandrahana ny kisary menio dia atoro anao.
Tranonkala mahafinaritra sy tsy miraharaha tsy mitady mihoatra ny voalaza.
Ny fanjakan'ny teknolojia eropeana
Raha tianao izany tranonkala iray misy menus sisiny izay miavaka amin'ny ambiny, jereo tsara ity iray ity izay manandrana azy ireo amin'ny fomba tsara hahafantarana ireo toerana, ny fahatsapana ary ny sarimiaina ireo.
Masoivoho nomerika iray izay mampiseho lanja lehibe amin'ny famolavolana tranonkala amin'ny alàlan'ny fitondrana anao sary mihetsika mahatsikaiky azo jerena rehefa ampidinoo amin'ny "K" ny totozy.
Tranonkala mahazatra hafa manasongadina a karazana collage izay misokatra eo alohantsika rehefa miroso isika.
Ronono marika Slovak malaza izay mampiasa fitrandrahana amin'ny alàlan'ny horonan-taratasy hanehoana traikefa an-tranonkala mendrika sy mahasarika. Liana farafaharatsiny.
Herokid Studio, Espaniola iray, dia mitondra antsika ny volavolan'ity tranonkala ity izay miavaka amin'ny mainty, mavo ary andian-dahatsary Mampiseho ny hakantony tokoa izy ireo amin'ny traikefa an-tampon'ny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Cartoon vector » Ireo tranonkala tsara indrindra mifototra amin'ny sary SVG
Sambo21 dia hoy izy:
Ao amin'ny fandinihana vessel21.com dia miloka amin'ny SVG ho safidy tsara indrindra mandritra ny fotoana maharitra izahay. Tianay! ary ny mpanjifa koa.
Valiny amin'ny Ship21
Guillermo Zamaripa dia hoy izy:
Ny dokambarotra Ovisoft dia manafika ary tsy mamela anao hijery tsara an'ity lahatsoratra ity. Tena ratsy, lahatsoratra tsara misy fampahalalana tsara.
Valiny tamin'i Guillermo Zamarripa
Azonao atao ny manokatra azy ireo amin'ny rohy ary miaina azy ireo ho anao: =)
Mpanakanto makiazy manodidina ny 60 sy sarontava mombamomba ny sarimihetsika Bright, tsy azo isaina